እነ ጌታቸው ረዳ ከ ጀዋር አንድ ነገር ሳይማሩ አይቀርም? እንደ ጀዋር እናደርጋለን ካሉ አድርገው እያሳዩ ነው… - Kichuu
HomeAfaan OromooTVእነ ጌታቸው ረዳ ከ ጀዋር አንድ ነገር ሳይማሩ አይቀርም? እንደ ጀዋር እናደርጋለን ካሉ አድርገው እያሳዩ ነው…
እነ ጌታቸው ረዳ ከ ጀዋር አንድ ነገር ሳይማሩ አይቀርም? እንደ ጀዋር እናደርጋለን ካሉ አድርገው እያሳዩ ነው…
Sekoture Getachew admits TPLF attacked Northern Command
“We had to preemptively conduct the operation as lightning strike against Northern Command” – Sekoture Getachew of #TPLF, admitting for the first time that #Tigray Special Forces attacked the military base in the Region
(Courtesy of Dimtsi Woyane)
bahar daar. goondar. baqatoni danga 13000 sudan.. art keekiya nagayan biya birati cehu art jaafar hi
AGM: TPLF Magaalaa Bahaardaar Rookkeetti Lamaan Kan Barbadeesse Ana Jedhe
Akka sabaatti fuuldura keenya maaltu jira? Furmaati rakkina nu fuula dura jiru kanaa maali
Lola Kaaba Impaayera Xoophiyaa keessatti adeemaa jiru bu’uura godhachuun barruu qindaa’e. Barruun kun waaraana TPLF fi PP amma ta’aa jiru kana haga tokko sababa kan ta’e eeraa, itti baha lola sanaas ibsuun yaala. Lolichi akkamiin goolabama kan jedhu yaadota tilmaamaas nii hammata.
Dubbiin lola PP fi TPLF hangas mara waan nu dhiphisu waan hintaaneef waa’ee Oromoof Oromiyaa irratti gadi faginaan akka hawwaasa keenyaaf hubatamuu qabutti barreessuufan deema. Egeree biyya abbaa keenyaa Oromiyaa fi Egeree keenya egeree Oromoos rakkina siyaasaa nutti dhufuu maluuf qoricha rakkina sanaas lafa kahaan adeema. Rakkina qofa barreessuu utuu hintaane falaaf mala barreessinee irratti qiyyaafatuun warraaquu, biyya abbaa keenyaa Oromiyaaf akkuma abboota keenya kaleessaa aarsaa taanee kabachiisuuf Oromummaa jiraachisuuf wantoota nuti dhaloonni har’aa shaffisaan gochuu qabnus akeekaan deema.
Hub: Barruun kun yaadoota sammuu kiyya keessatti hurruubamanii jiran, tilmaama egeree waa’ee biyyakoo kan na yaachisu kanin akka nama tokkootti yaadda’uuf furmaata ta’uu qaba jedhee kanin barreesse ta’uus naa hubadha. Amma walumaan gara barreeffamichaatti ceena.
Seensa: “Lafa dhugaan hinjirre nagaan hinjiru” jedhu hayyooti Oromoo Dr. Gammachiis Magarsaa. Akkasuma Gooti Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaas lafa dhugaan hinjirre nagaan hinjiru. Dhugaan saba keenya Oromoo deebi’uu baannaan Xoophiyaa qofa utuu hintaane gaanfa Afrikaaf balaa guddaa ta’uu mala jedhu.
Akkuma hayyuuf gootonni Oromoo lamaan kun jedhan dhugaan uummata Kuush ukkaamamuun gaanfa Afrikaatti jeequmsa waraanaa uumeera. Dhugaan awwaalame kun akka ifa bahu taasifamaa waan hinjirreef daranuu rakkoof balaa uumame kana nii babal’isa! Akkamitti kan jedhu waliin ilaalla!
Qophiin waraanaa TPLF fi PP(OPDO/ODP) waggaa 2 duraa maal fakkaata ture?
Waggaa lama dura qabsoo uummati Oromoo dargaggoonni keenya Oromoon taasisanii jijjiiramni siyaasaa abdatamaan wayii dhufee ture. Jijjiirama sana keessatti gahee olaanaa kan qabu ilmaan Oromoo yoggaa ta’u, qabsicha Qeerroo Bilisummaa Oromoon finiinuudhaan TPLF jilbeenfachiisuu irra gahe.
Aangoo sirna EPRDF keessaa guutuun dhuunfachuu jechuun akka fedhanitti ajajuudhaan TPLF waggaa 27’f aangoo siyaasaa dhuunfatanii turan. Aangoo siyaasaa kana keessatti waan fedhan taasisuu, nama barbaadan jiraachisanii kan hinfeene ajjeesuu, bifa nama sururuun dalagaa ciigasiisaa ilmaan Oromoof saboota Cunqurfamoo Impaayera biyyattii irraan gahaniiru. TPLF aangoo siyaasaa waan qabuuf baroottaan olitti eere kana keessatti bifa ajajaan haa raawwatu malee, namootiin hojii nama sururu kana saba isaanii irratti dalagaa turan PP har’aa OPDO duriiti.
Badii PP har’aa OPDO durii isa jalqabaa:
Qaamoleen OPDO kun ykn saba isaaniif ta’anii yookaan ammoo kan mataa isaanii hinfayyadne ta’uu wantoonni namaa raageessan hedduudha. Bara aangoo siyaasaa EPRDF TPLF dhuunfate sanatti aangoon OPDO’n qabaataa turan ajajamanii ajjeesuu, ajajamanii dararuu ture.
Qaamota isaanii ykn waraana OPDO durii irraa akkan odeeffadhetti akka dargiin kufeen erga EPRDF jalatti hammatamanii hojii biyya bulchuu mootummaa Naannoo Oromiyaa jalatti argatanii waggaa muraasa booda maqaa ‘Bowwozaa’ jedhuun waraana ofii qabaniif kan TPLF walitti dabalan jedhama.
Waraanni kun erga walitti dabalamee waraana TPLF’n hogganamuu akka qabutti jarri warra Tigiree haala jiru mijeeffatan.
Wayiita Tigiroonni hojii siyaasaa waraana biyyattii dhuunfatuu hojjetan, tibba bara Chaarteraa (1991) sanatti ilmaan Abbaa Duulaa (OPDO) ammoo qaama isaaniifuu wabii ta’uu male ABO adamsanii ajjeesuu, jireenya miseensota ABO barbadeessuu fi nama dinagdeen cimaa Oromoon qabdu magaalaa hunda keessaa ajjeesuu irratti ko’ommatanii dalagaa turan. Isaan asii yoggaa “ABO, humna badii, Mankaaraarsitoota” jedhanii saba keessaa dhalanne jedhan Oromoo daguuganitti TPLf ammoo waa’ee egeree, waa’ee biyya keessatti dhalatan Tigiraay har’aaf dhiphataa fi dhimma har’a dhohe kanaaf utubaa dhaabaa turan. Aangoo waraanaa gara lammii isaaniitti naanneessan. Hogganni waraanaa akka dhalataa Tigiree ta’uu qabutti haala mijeessan.
Miseensa waraana OPDO durii har’a uummata isaa Oromoo faana jiraatu an irraa dhimma kana qoradhe akkana jedha. “Yeroo sanatti(bara chaarteraa) Aangaa’otni keenya (OPDO’n) Bowwozaa jedhanii itti nu kennaniituma dachaa’an. Nurra dhiibbaan yoggaa gahullee qaamni nu hogganu warruma TPLF waan ta’eef nuuf balaa ture. Hariiroo siyaasaa ofaaf bilisa ta’e utuu hintolfatin callisaniituma itti nu makanii deebi’an. Haala kana keessatti miseensi waraanaa dhalataan Oromoo hedduun lola Tigiroota faana seenee kan aarsaa ta’aa ture hedduudha” jedha.
Dubbii kana irraa kan hubannu, OPDO’n waa’ee dhuma isheellee yaaduu hindandeessu. Qaamni OPDO ta’ullee sammuun yaaduu isaatii gadi bu’aadha ta’a yookaan ammoo maal na dhibe ani nyaannaan, maal na dhibe ani aangoo gaarii argannaan yaada jedhuun waan argatan nyaatanii callisuu filatu ta’a.
Wayiita Tigireen waraana dhuunfachuu irratti bobbaatutti isaan ammoo waraana Oromoo WBO adamsuu, Dokimantarii garaa garaa irratti hojjetanii maqaa isa balleessuu, artistoota saba isaanii dammaksan ilmaan Oromoo qaalii ajjeesuu (Eebbisaa Addunyaa, Yoseef Gammachuu, Jireenyaa Ayyaanaa…fi hedduu), abbootii qabeenyaa ajjeesuu (Daraaraa Kafanii/Amboo) irratti ko’ommataa turan jechuu kiyya.
TPLF erga aangoo waraanaa dhuunfattee akka feetetti OPDO waamtee ergachuuf isheef mijaawe. Hanga sadarkaa ganda Baadiyyaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo qaalii ajjeesanii Oromiyaa kisaaraa har’aan gahuu keessatti qoodni PP har’aa OPDO durii TPLF gadi miti.
Badii PP har’aa OPDO durii isa lammaffaa:
Adeemsa kana keessatti waggaa 2 dura qabsoon uummata keenya Oromoo OPDO garbicha Wayyaanee(TPLF) luba baase. Luba baatoonni garbicha ta’anii waggaa 27 guutuu yakka ciigaasisaaf jibbisiisaa dalagaa bahan kun erga uummati Oromoo gamtoomee diinaa isaa Wayyaanee guutuu sirna EPRDF kana gulubii isaa caccabsee booda, maqaa dhiifamaan gara qabsoo uummataatti akka makaman miira agarsiisu mul’isan.
Adeemsa kana keessatti arraba toluudhaan yakka hojjetan sana amanaa keessattuu dubbiin Abiyyi Ahemad ragaa tokko “Shororkeessaan nu’idha. Kan uummata nagaa ajjeesaa ture nu’idha. Kan fannisee uummata garafaa ture, kan qeensa ilma namaa irraa ciraa ture nutu Shororkeessaadha!” Jechoota jedhuuf dubbiiwwan akka waan hojii isaaniitti gaabbee fakkeessan hedduu dubbate.
Sirnichi bututee Mallas Zeenaawwii erga du’ee, Hayila Maariyaam Dassaalleenyi maqaaf bakka obbo Mallas buufamullee aangoo siyaasaa hunda tohatanii waan jiraniif TPLF akkuma duraatti biyyattii weerarte. Waggaa muraasa booda qabsoon uummata Oromoo isa ijibbaataa addunyaayyuu “ajab!” Jechisiisu irra gahe. Daadannoowwan “isin barbadeessina! Isin dhabamsiifna!” Jedhan karaa Hayila Maariyamii dubbatamanis qabsichi daranuu finiine.
Maataan paartichaa OPDO kan hogganu Obbo Mukaataar Kadir bulchaan naannoo Oromiyaas waraanni Agaazii lubbuu dargaggoota Oromoo qaalii, lubbuu barataa Oromoo deettiin itti dhukaasaanii ajjeefnaan miidiyaan bahee Agaazii galateeffate. Ammas; Haalli kun daranuu qabsoon Oromoo akka finiinu taasise.
Adeemsi qabsoo Oromoo bal’achuu, wiirtuun qabsoo Oromoo dhugaa irratti ijaaramee margee dagaaguu irraan EPRDF fala dhabsiisuu irra geessise. Gurmuun uummata Oromoo tokkummaan saba keenyaa hudhee qabuudhaan, adeemsi qabsoo Oromoo ABO’n taliigamus gabbataa dhufuun sirna EPRDF burkataa’uuf sadarkaa bitaatta’uu irra geessise.
Wayiita uummata Oromoo waliin jiraachuun sirna EPRDF abjuu ta’e keessa yooggaa gahan aanga’onni TPLF meeshaalee waraanaa gurguddaa Oromiyaa keessaa irra ija kaawwatan. Wayiita aangaa’onni TPLF gama meeshaa waraanaa Impaayeea Xoophiyaa saammachuutti qalbii deeffatanitti, qaamni naannoo Oromiyaan bulcha jedhu ammoo midhaan qophaa’aa lafatti argatan aangoo EPRDF hogganuu irratti xiyyeeffatan. Sana irra utuu hinilaalin TPLF meeshaa waraanaa gurguddaa Tigiraay gahatani. OPDO’n ofis kan hinfayyadne ta’uu fi badii gurguddaa lammaffaa isaan raawwatan meeshaa waraanaa akka biyyaatti qabamee jiru wayiita TPLF dhuunfattu afaanuu hinbaafanne. Xisximbaa hinjenne. Ijji isaanii garuma aangootti kan qiyyaafate OPDO’n shira ittiin garaa Oromoo laaffifatan qopheessuu qofatti as deebi’an. Kana dursuun TPLF (EPRDF) Muummicha taasisuudhaan Abiyyi Ahemad muude.
Kanaan booda Oromoo of faana hiriirsuuf waan hojjetuu qaban qofatti xiyyeeffatan. Maqaa isaanii OPDO gara ODP tti jijjiiran. Qaamuma bifa addaan Oromiyaa ijaaruuf kutate, qaama daangaa Oromiyaa kabachiisuu danda’uuf qaama Oromoof Oromiyaa kabachiisee jiraachisuu danda’u of fakkeessanii miidiyaan lallaban. Uummati keenya garri kaan harka reebe. Kanneen shira jaraatti amannu yoggasuu shira ta’uu himuu itti fufne.
Gama kaaniin hojiin isaan waggaa 27 hojjetan yakka ta’uu, kanas garaa dhuma irraa nama kulkulfatee dubbatu fakkeessuuf “Mana hidhaa Maayikaalaawwii bakka daawwii (Muziyeemii) goona” jedhan.
Daawwachiisanillee. Uummatni Oromoo yakkamaa kana dalage seeratti nuu dhiyeessaa jedheen. OPDO’n ofii akka badii hinqabneetti of ilaaluun, maqaa gara ODP tti jijjiirratan uummata dura qabanii kan Oromiyaa keessaa uummata miidhe OPDO dhe malee ODP miti yaada jedhu lakkisan.
Yakkamaa of gochuu waan hinfeeneef kanneen yakka waggaa 27 duraa dalage TPLF’dha. Isammoo seeraaf dhiyeessina jedhan. Dokimantarii waan nama suukanneessu sana badii hojjetame sanaas dalaganii miidiyaa biyyattiif raabsan.
Asitti TPLF qaama ofii bixxilte PP har’aa OPDO durii sanatti mufatte. Geetaachoo Raddaa miidiyaa BBC irratti yaada inni laates kana akeeka. “Waggaa 27’f biyyattiif oolmaa guddaa oolleerra. Kana kan gumaachine akka sirna EPRDF tti malee qofaa miti. Badiin dalagame yoo jiraates EPRDF guutuun walumaan itti gaafatamna” jedha. OPDO yakka seeraa jalaa bahuuf yoggaa qaama waliin hojjetaa turan lolan kanatti, TPLF garuu nuti Oromiyaa keessa deemnee kana hingoone. Badiin raawwatame kan OPDO waliin dalagnedha yaada jedhu laata.
Adeemsi wal dhabdee kun hammaachuun waraanni hololaa lamaan isaanii gidduutti baname.
Badiin keessa deebii hinqabne, badiin dhiifama hinqabne PP’n har’aa OPDO’n durii raawwatan wayiita TPLF achi deebitee waraana ijaarrataa baate kana, wayiita lammiileen Tigiraay walii galanii waraana ijaarratan ammas marroo dabalataa caasaa ABO fi KFO adamsanii hidhuu, ajjeesuu dararuu hojii isaanii idilee waggaa 27 duraatti deebi’an. Ilmaan Oromoo nagaa hedduu irrattis mana jireenyaa guban. Isaan asii wayiita mana uummata nagaa gubanii, nama ajjeesan warri Amaaraas mormaaf bulchaan naannichaa wal mari’atee waraana saba isaa tiksu ijaarrataa bahan.
Meeshaa waraanaas kuufatanii waan qabaniif humna namaa leenji’een wal simsiisanii amma waraanni adeemu kun baname.
Lola kanaan eenyutu injifata?
Lolli TPLF fi PP gidduu kun amma daboo biraa dabalateera. Humnooti Amaaraa guutummaan gara PP goruun, dabalataan Eertiraanis PP cina buutee waraanni bal’aan banamee jiraachuu dubbatamaa jira.
Waraana kana keessatti TPLF meeshaa gahaf biyya ishee keessa waan ta’eef guutuun lammiilee Tigiree biyya isaanii tiksuuf waan ta’eef injifachuuf carraa qabaachuu malu. Tarii ammoo PP’nis injifachuu danda’a. Wiirtuun ykn goolabni siyaasaa gaanfa afrikaatti dhalate kun kan Ipaayera Xoophiyaa xumura argachuun ulfaachuu mala. Kan furmaata ta’uuf marti deemee deemee dhuma irratti kan itti walii galu Mootummaa Ce’umsaa akka ta’e hubachuunis barbaachisaadha.
Qaama lamaan keessaa yoo injifannoon jiraateef egeree Oromoof Oromiyaa!
Mata duree kanatti utuu hindarbin, akkuma TPLF duraa sanatti humnoonni Amaaraa meeshaalee waraanaa Impaayera Xoophiyaa gara Gondoritti guurrataa akka jiran dubbatamaa jira. Kana jechuun akkuma TPLF sana, qophiin waraanaa waggoota fuulduraaf Amaarri taasisaa jiran akka jiru hubachuun salpha.
Jarri Amaaraa kunis utuma har’a TPLF cabdee eger deebi’anii humna PP kana cabsanii sirna Atsee sana deebisuuf akka rafanii hinbulle hubachuun nii barbaachisa. Abiyyi utuma Oromoo ajjeesuu, utuma Ulfa Oromoo ajjeesee, dargaggeessa nagaa Oromoo jiilmaan ajjeesee kiiloo Afur taa’ee injifannoodha jedhee lallabuu qaamoti inni bobaa isaa jalatti akka of ijaaran taasisaa jiru as deebi’anii isa akka rukutan tilmaamuun barbaachisaadha. TPLF yoo injifatamte, humnoonni Amaaraa as deebi’anii PP waraanu. O
Isaan kun yoo PP injifatan gara saba keenya Oromoo rukutuutti fuulleffannoon socho’u. Kana tilmaamuun barbaachisaadha.
Lola TPLF fi PP ammaa kana keessaa qaama kamuu ha ta’uu, abbaan injifate Oromoo nii waraana. TPLF yoo PP injifatte deebitee Oromoof Oromiyaa irratti waraana nii banti. PP’n yoo TPLF injifate waraana Oromoof Oromiyaa irratti labse kana jabeessee adeemasisa.
Kanaafuu falli Oromoof Oromiyaa mali?
Furmaati egeree Oromiyaa jiraachisuuf nuti qabnu dhaabbilee siyaasaa dhugaadhaan uummataaf qabsaa’an addatti ABO dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Tokkummaadhaan waan fuula kana duratti nutti aaggammatee jiru kana injifachuuf ammuma irraa ilmi Oromoo kamuu of haa qopheessu.
Dubbichi dubbii jiraachuuf jiraachuu dhabuu waan ta’eef waan biyya abbaa ofiif namni kamuu dirqama irraa eegamu bahachuu cimsee itti haa fufu! Dubbiin amma eegale isa miidiyaan injifatamu waan hintaaneef, Oromoon humnoomuu qaba. Humnoomuun ammoo humna qaban jabeeffachuu, ijaarraachuu barbaachisa. Miidiyaaf maallaqa gadi dhangalaasuu qofa utuu hintaane, waan furmaatatti nu adeemsisuuf gumaacha taasifnu taasisuu qabnaan dhaamsa kiyya.
Walii galatti akka Oromootti furmaati amma qabnu mootummaa Ce’umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaarrachuu ta’uu waliif himuu feesisa.
Kanaanis wal caalla. Fashisttummaa Neftegna mee ilaalaa!!
ስዩም ረታ says:
በአለም አቀፍ ህጉ መሠረት ኤርትራ ኢትዮጵያን አጠቃች ብለን ሀገር ወዳድ የሆንን የኢትዮጵያ ዜጎች በሙሉ ኤርትራን የመውጋት መብት ሊኖረን ነው የኤርትራ ጦር በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ምንም ላይ ጥቃት ከፈጸመ ወያኔንም እንኳን ከአጠቁ።
ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከየአለም እቀፉ ህብረተሰብ የጦር እርዳታ አልጠየቀችም ። ኤርትራ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ገብታ አሸባሪን እንኳን ብታጠቃ ባሁኑ ሰአት ከወረራ ተቆጥሮ የአለም በአቀፍ ህብረተሰብ ኤርትራ ላይ እንደገና ማዕቀብ ሊጥል ይችላል። ።
አሸባሪን በሌላ ሉዐላዊ ጎረቤት ሀገር ዘልቆ ገብቶ ለማጥቃት በመጀመሪያ ደረጃ አሸባሪው የሚገኝበት ሀገር መንግስት ማድረግ ካለባቸው ነገሮች ከብዙ በጥቂቱ –
ሀ. አሸባሪው የሚገኝበት ሀገር መንግስት አሸባሪዎቹን በአሸባሪነት መፈረጅ እና መክሰስ
ለ. አሸባሪው የሚገኝበት ሀገር መንግስት ከአለም አቀፍ መንግስታት ( War on terror) የጦር እርዳታ መለመን
ሐ. በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልሸባብን ለመውጋት ለየተባበሩት መንግስታት አከራይቶ ሲልካቸው የነበሩ ወታደሮች በቅጽበት ዛሬ እነርሱ እራሳቸው መቼ እና እንዴት ወደ አሸባሪነት እንደተቀየሩ በዝርዝር ማስረዳት ፡ ለማስረዳት 1. መንግስት ከአጫሉ ግድያ ጋር በተያያዘ ስንት ግለሰቦች እና የተቃዊሚ ፖለቲካ መሪዎች በምን ምን ማስረጃ ተመርኩዞ አሸባሪ ብሎ ከሶ መንግስት እንደአሰራቸው ማሳየት
2. አሸባሪዎች አሁንም በኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ውስጥ መኖራቸውን ወይም አለመኖራቸውን በአሳማኝ ሁኔታ ማሳየት
3. አሸባሪዎች አሁንም በፌደራልም ሆነ በክልል የመንግስት መዋቅር ውስጥ መኖራቸውኅ ወይም አለመኖራቸውን በአሳማኝ ሁኔታ ማሳየት
መ. ምን ምን አይነት የጦር አቅም ኢትዮጵያ እንደ ጎደልዋት የኢትዮጵያ መንግስት በገሀድ ዘርዝሮ ለአለም አቀፍ ህብረተሰብ ማሳየት እለበት ። የኢትዮጵያ መንግስት የሠለጠነ የሰው አቅም እጥረት ፣ የመሳሪያ አቅም እጥረት ፣ የአማካሪ እጥረት ፣ የሠለጠነ መሪ እጥረት ወይስ ሌላ አይነት የእጥረት አይነቶች እንደአጋጠሙት በግልጽ የኢትዮጵያ መንግስት ለአለም አቀፍ ህብረተሰብ አሳውቆ በመቀጠልም የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁምም ሆነ ሌላ አይነት ትዕዛዝ የተባበሩት መንግስታትም ሆነ ወይም የአፍሪካ ህብረት ሲያስተላልፍ ለመተግበር መዘጋጀቱን መግለፅ አለበት በእለምአቀፍ ህግ መሠረት።
*የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን የሚያዛትን የኢትዮጵያ መንግስት ሳያንገራግር ተግቢራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆን ይገባዋል ኤርትራ ከእዛ በሁዋላ በአፍሪካ ህብረት ወይም በተቢበሩት መንግስታት ሰላም አስከቢሪነት UN Peace Keeper or AU Peace Keeper በመሆን ብቻ ወታደሬሮችዋን ልትሰድ ትችላለች ወደ ኢትዮጵያ በመቀጠል ግብጽም ከተላከች ኢትዮጵያ ያለ ማንገራገር የግብጽ ሰላም አስከቢሪዎችን መቀበል ግኝት የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል አይዘነጋ።